Ndeapi Akanyanya Kukosha Mazuva Ano Ekushambadzira Unyanzvi muna 2018? | Martech Zone
Muvhuro, October 1, 2018 Chipiri, Gunyana 2, 2018 Douglas Karr
Mwedzi mishoma yapfuura ndanga ndichishanda pane zvemakosi edhijitari ekushambadzira mashopu uye masitifiketi ekambani yepasi rese uye yunivhesiti, zvichiteerana. Rwave rwuri rwendo runoshamisa - kuongorora zvakanyanya kuti vashambadzi vedu vari kugadzirirwa sei muzvirongwa zvavo zvedhigirii, uye vachiona mipata ichaita kuti hunyanzvi hwavo huwedzere kutengeswa munzvimbo yebasa.
Chinokosha kune echinyakare degree zvirongwa ndechekuti ma curriculae anowanzo kutora makore akati wandei kuti abvumidzwe. Nehurombo, izvo zvinoisa vanopedza kudzidza makore kumashure pavanopinda munzvimbo yebasa kunze kwekunge vanga vaine ma internship anovaka.
Zvinonyanya kukosha pane kudzidza iyo inogara ichichinja nzvimbo yekushambadzira tekinoroji mapuratifomu, vashambadziri vanofanirwa kuve nehunhu nzira yekuronga, kuyera, uye kuita chero kushambadzira chirongwa. Ndosaka ndakagadzira iyo kushambadzira mushandirapamwe… Irwo runyorwa rwakakwana rwunoona kuti danho rako richabudirira sezvarinogona.
Tekinoroji uye vezvenhau vezvemagariro vakaita shanduko huru pakushambadzira mumakore mashoma apfuura. Zvakanyanya, zvekuti varidzi vemabhizinesi madiki, vanamuzvinabhizimusi, uye vashambadziri vangangoda kumutsiridza yavo seti yehunyanzvi kuti vanyatsobatana nechizvarwa chinotevera chevatengi (Gen Z) vachinyatso kushandisa hunyanzvi hwekufambira mberi. Maryville University Bachelor iri Mukushambadzira
Maryville University yakaisa pamwechete iyi yakadzama runyorwa rwehunyanzvi hunodiwa kuti vatengesi vabudirire munzvimbo yebasa. Ive neshuwa yekuverenga yavo yakazara posvo ine pazasi infographic, 11 Mazuva Ano Okushambadzira Unyanzvi hweBhizinesi Vagadziri kuna Master.
Unyanzvi Hwakanyanya Kukosha Hwazvino Hwekutengesa hwa2018
Zvemukati Kushambadzira - Masangano emarudzi ese anogona kushandisa vashambadziri vanogadzira zvepakutanga, zvinobata, uye zvemukati zvemukati. 86% yevatengesi vanoshandisa kushambadzira zvemukati sechikamu chenguva dzose chehurongwa hwavo, vangave vari kushandira makomisheni epasirese kana madiki, emabhizinesi emuno Zvisinei, chete 36% vanoongorora hunyanzvi hwekutengesa zvemukati sevanhu vakuru kana vehunyanzvi. Zvemukati zvisikwa uye manejimendi, webhu analytics, uye dijitari manejimendi manejimendi ihwo hunyanzvi hwakakosha munzvimbo ino.
Mobile Kushambadzira - Mamiriyoni 219.8 maAmerican - 67.3% yevagari vekuUS - vane yavo smartphone. Izvi zvinogadzira marongero efoni akakosha kushambadziro yesangano. Mukana wekusvikira vateereri vakawanda kuburikidza nharembozha yakakura, sevanhu vekuAmerican vanotarisa mafoni avo avhareji ka47 pazuva. Nhamba iyoyo inenge yakapetwa kaviri kune vekuAmerican vane makore gumi nemasere kusvika makumi maviri nemana, vanoongorora nharembozha yavo paavhareji makumi masere neshanu zuva nezuva hunyanzvi hweKiyi mukati medzimbo iyi inosanganisira mafoni ekugadzira, kusimudzira nhare, uye e-commerce analytics.
E-mail Kushambadzira - E-mail kushambadzira rave riri zano rekutanga kwemakore akati wandei uye richaramba richidaro. 86% yevatengesi vanoshandisa e-mail kugovera kushambadzira zvemukati. Kushambadzira otomatiki, ekunyorera nzira dzekubata, uye ekunyora masystem ekukura zvese zvakakosha zvinouraya mukati meiyi zano.
Yemagariro Media Kushambadzira - 70% yaGen Z inotenga zvigadzirwa nemasevhisi kuburikidza nesocial media, ichigadzira kushambadzira midhiya enhau nzira yakakosha yekusvitsa huwandu hwevanhu 69% yeGen Z inoshandisa Instagram, ichiita chizvarwa chinozivikanwa kwazvo pasocial media chikuva. Izvi zvinoteverwa neFacebook neSnapchat, iyo imwe neimwe inoshandiswa ne67%. Paavhareji, vashambadziri vanoshandisa shanu enhau midhiya mapuratifomu kugovera zvemukati. Unyanzvi hwakakosha munzvimbo ino hunosanganisira manejimendi manejimendi manejimendi, zano remukati, uye gwara rekugadzira.
Tsvaga Injini Yekushambadzira - Kuwana traffic kuburikidza ne organic uye yakabhadharwa yekutsvaga inoda kuti vashambadzi vagare varipo nekuchinja kwese. Semuenzaniso, Google inogadziridza algorithm yayo kanopfuura mazana mashanu pagore. Kukura kwekutsvagisa injini (SEO) uye organic kuvepo ndiko kukoshesa pakati pe500% yeNorth American inbound vashambadzi SEO, yakabhadharwa yekutsvaga kushambadzira, uye webhusaiti optimization iwo ese akakosha hunyanzvi munzvimbo ino.
Vhidhiyo Kugadzira - 76% yevatengesi vanogadzira mavhidhiyo sechikamu cheshambadziro ravo rekushambadzira Aya mavhidhiyo anogona kusanganisa mabvunzurudzo, mifananidzo, uye mamwe maitiro ekutaura nyaya. Ichi chinhu chakakosha kusvika paGen Z. 95% yechizvarwa chinoshandisa Youtube, iine 50% yavo ichiti "havagone kurarama vasina" webhusaiti inotungamirwa nevhidhiyo. Unyanzvi hwakakosha munzvimbo ino unosanganisira kugadzirisa vhidhiyo, mifananidzo, uye zvemukati curation.
Kuongorora Dhata - 85% yevatengesi vanoshandisa analytics maturusi munzira yavo yekutengesa. Analytics ndiyo yechipiri-yakanyanya kuoma hunyanzvi hwakagadzirirwa kuwana mune nyowani yekushambadzira tarenda, ne20% yevatengesi ichiti zvakaoma kuwana Kunyangwe paine kuoma uku, 59% yevatengesi inoronga kuwedzera yavo emadhijitari bhizinesi analytics hunyanzvi kumasangano avo. Kuchera dhata, kuona kwedata, uye kuongororwa kwehunyanzvi hunyanzvi hwakakosha munzvimbo ino.
Blogging - 70% yevatengesi vanoshandisa mablogiki kugovera zvirimo zvekushambadzira uye kublogi kazhinji kunogona kusimudzira traffic Makambani anotsikisa 16+ zvinyorwa pamwedzi akawana angangoita 3.5 zvakapetwa kupfuura makambani anoburitsa pakati pe0-4 mwedzi pamishumo. Unyanzvi hwakakosha munzvimbo ino hunosanganisira kugona, kunyora, uye kutanga.
Unyanzvi hwekushanda - Hunyanzvi hwekushanda hunyanzvi ndihwo hunyanzvi hunyanzvi hwakagadzwa nevashambadzi veadhijitari sekukosha mukuvagonesa kuzadzisa zvido zvavo zvese. Nekudaro, zvakawanikwawo kuva hunyanzvi hwakaomesesa hwakagadzirirwa kutanga tarenda nyowani rekushambadzira. Kubhadharisa mari, kurongeka kwesangano, uye ROI uye kuyerwa kwemetriki ihwo hunyanzvi hwakakosha munzvimbo ino.
Unyanzvi hweVashandisi - Mushandisi ruzivo ruzivo ndeye yakanyanya kunetsa maitiro kune vatengesi. Nekudaro, ruzivo rwevashandisi ruzivo runogona kujekesa pane zvinodiwa nevatengi uye hunhu uye kubatsira dhizaini mawebhusaiti uye maapplication kutyaira vatengi kuchengetedza uye kutengesa. Kutsvagisa, kupa kwevatengi maitiro ekuziva, uye kukodha ese hunyanzvi hwakakosha munzvimbo ino.
Dzakakosha Dhizaini Unyanzvi - 18% yevatengesi vanotaura hunyanzvi hwekugadzira hwakaoma kuwana mu tarenda nyowani rekushambadzira, zvichiita hunyanzvi hwechitatu hwakaomesesa kuwana mu tarenda nyowani rekushambadzira Zvisinei, kushambadzira zvemukati mune ayo ese mafomati kuchiri kuda kuve kunoratidzika kutaridzika, uye hunyanzvi uhu hunopfuurira kuve mukuda. Unyanzvi hwakakosha munzvimbo ino hunosanganisira graphic dhizaini, kugona, uye dhizaini yekuona.
Heano akazara infographic:
Tags: Analyticsbachelor's mukushambadziraBloggingContent MarketingDatapataniechikwata chekudhindaKushambadzira mashandirokushambadzira opsmaryville yunivhesitiYeMahara neThebhu Kushambadziraorganic searchyakabhadharwa kutsvagaTsvaga KutengesaSocial Media Marketinguiuser experienceuxvhidhiyo marektingvideo production